Jona 7, 2018 Admin
Mety hanomboka crypto Vadinao fifanakalozana
Mivadika Amin'ny Vadinao Investments, hentitra izay miandraikitra $2.5 tapitrisa tapitrisa in nahavita fananana, dia tetika ny buildout ny vokatra izay hanosika ny tsena ho an'ny Bitcoin any amin'ny ambaratonga manaraka.
Fanampin'izany, Fandraisana mpiasa avokoa ny fahatokiana no hanorina nomerika-pananana fifanakalozana, Araka ny asa anatiny AD. Ny mafy mitady ny rafitra DevOps injeniera “mba hanampy ny injeniera, mamorona, ary miisa ny Digital Asset fifanakalozana ny na ny miankina sy tsy miankina rahona.”
Ny mafy ihany koa miasa ao amin'ny trano-maizina vahaolana ho an'ny crypto, araka ny asa iray hafa taorian'i JK.
Raha nandefa Vadinao soa aman-tsara ireo vokatra, izany dia maneho iray amin'ny lehibe indrindra moves iray Wall Street mafy orina any an-tsena ho an'ny fananan'ny nomerika.
Tsara ny manamarika, Ny Filoha Tale Jeneralin'ny Vadinao, Abigail Johnson, dia proponent ny Bitcoin.
Raha Vadinao no hanomboka ny crypto fanatitra fifanakalozana, arguably dia mety ho anisan'ireo lehibe indrindra amin'ny alalan'ny lehibe moves Wall Street mafy orina any an-nascent crypto tsena, izay mijoro amin'ny about $350 lavitrisa.
Thailand fitsapana Banky Foibe cryptocurrency
Bank of Thailand ny governora nilaza Veerathai Santiprabhob amin'ny teny vao haingana fa ny fampivelarana ny ambongadiny banky foibe vola nomerika amin'izao fotoana izao ao amin'ny fantsona ho anisan'ny firenena midadasika kokoa ny ezaka eo amin'ny trialing blockchain teknolojia amin'ny sehatra isan-karazany.
ny tetikasa, atao hoe Inthanon, mizara ny anaran'ny tendrombohitra avo indrindra Thailand, mikatsaka ny hamorona ny banky manokana blockchain miorina cryptocurrency hanao varotra na interbank haingana sy mora vidy kokoa.
Dia hoy izy tamin'ny fitenin'i:
“Ireo ezaka tokony hanamboatra ny lalana izay haingana kokoa sy mora vidy kokoa raharaham-barotra sy ny fankatoavana noho ny tsy fanelanelanana ilainy ny amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny rafi-.”
Northern Trust raki-daza noho ny mitahiry patanty fivoriana minitra amin'ny blockchain
Asa ara-bola mafy Northern Trust nahazo ny patanty ny manampy ny rakitsoratra ny fivoriana mampiasa blockchain Tech.
Ny fomba mampiasa andianà marani-tsaina angon-drakitra mba hisambotra fifanarahana mifandraika amin'ny fivoriana, anisan'izany ny firaketana an-tsoratra ao izay manatrika (sourced avy amin'ny fitaovana mba hitondra), rehefa nitranga ilay fivoriana ary aiza.
Northern Trust hones ao amin'ny tena manokana tranga fampiasana, hetsika tahirin-kevitra, Ary miresaka ny mafy ny fironana midadasika kokoa ny fanangonana tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny miasa rafitra nozaraina.
Coinbase mahatonga ny fandrosoana mba ho voafehy ireo Fiarovana mafy
Cryptocurrency fifanakalozana Coinbase Alarobia nanambara fa voalaza fanaovana dingana mankany amin'ny fiafarany ny miasa iray nifehy federally broker-mpivarotra.
Chief fandidiana manamboninahitra sy ny filoha Asiff Hirji nanoratra tao amin'ny lahatsoratra bilaogy orinasa fa ny tsara dia eo amin'ny dingana ny hahazo ny fahazoan-dàlana broker-mpivarotra. Ny orinasa mikasa hitady sitraka avy amin'ny U.S. Fiarovana sy Exchange Commission (SEC) ary ny Financial Regulatory Authority Industry (FINRA) mba hanolotra blockchain mifototra amin'ny Fiarovana.
$118M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
elvera hoy i:
Jona 29, 2018 amin'ny 10:23 AM